अमेरिकाको दंगामा उग्रवामपन्थी संगठन एण्टिफाको हात ? – Durbin Nepal News
जेष्ठ २१, २०७७ ३:४५ मा प्रकाशित
अश्वेत अमेरिकी जर्ज फ्लोइडको मृत्युले दनदनी बलिरहेका अमेरिकाका शहरमा एण्टिफाको दादागिरी र आतंक चलिरहेको राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बताइरहेका छन । ट्रम्पले यस अघिपनि धेरैपटक एण्टिफाका कारण अमेरिकामा खतरा बढेकोले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउंदै आएका छन । त्यसैगरी अघिल्लो बर्ष मिजौरीमा भएको ट्रम्प सम्मिलित चुनावी र्यालीलाई भाँड्ने चेतावनी दिएको एण्टिफाको अवरोध रोक्न ठुलै सुरक्षा फौज तैनाथ गर्नु परेको थियो । संबिधानमै कम्युनिष्ट शब्द सुन्न नचाहने अमेरिकामा एण्टिफा एउटा चरम बामपन्थी समुहको प्रभाव निकै छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो । एण्टिफा फाँसीवादी विरोधी बामपन्थी निकट संगठन हो र अमेरिकाका केही राज्यमा यसको प्रभाव पनि छ ।
आखिर के हो त एण्टिफा, जसलाई हिंशा भड्काएको आरोप लाग्ने गरेको छ
एण्टिफा आफैमा एउटा संगठन हैन । यसका न अध्यक्ष छन न त कुनै केन्द्रिय कार्यसमिति छ । यसको अमेरिकाको कुनै राज्यमा केन्द्र तथा शाखापनि छैन, तर यसका फलोअर भने धेरै नै रहेको अनुमान मात्र हो । यसको बारेमा खासै कुनै तथ्यांक छैन । यो एण्टी फासीष्ट अर्थात बामपन्थी झुकाव भएका व्यक्तिहरुको समुह हो । जसले दक्षिणपन्थको विरोध गर्दछ अर्थात अमेरिकाको स्वेत राष्ट्रवादकोपनि विरोध गर्दछ । तर अमेरिकामा हुने विभिन्न हिंशात्मक तथा शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमा एण्टिफाको उपश्थिती हुने गरेको एफबीआइको दावी छ । ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि त झन उनले एण्टिफाको नाम धेरै पटक लिने गरेका छन । जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि भडकेको हिंशामा एण्टिफाकै हात रहेकोले आतंककारी संगठन घोषणा गर्नुपर्ने ट्रम्प बताउछन । अतिवादी तथा दक्षिणपन्थको विरोध गर्नु र अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गर्नुलाई आफ्नो आदर्श मान्ने भनिएपनि यो संगठन हिंशात्मक गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा एलजीबीटीक्युका पक्षमापनि आवाज उठाउंदै आएको छ एण्टिफाले । आफ्ना गतिविधि अत्यन्तै गोप्य ढंगले सञ्चालित हुने भएकोले एण्टिफाको बारेमा अझैपनि अन्यौल देखिन्छ ।
एण्टिफा मुभमेन्टको शुरुवात
न्युयोर्क टाइम्सले जनाए अनुसार एण्टिफा शब्दको शरुवात सन १९४६ मा जर्मनबाट शुरु भएको थियो । एण्टिफा जर्मन तानाशाह हिटलरको नाजी दलको विरुद्धमा खडा भएको अभियान थियो । यसले इटलीका फासिस्ट दलका नेता मुसोलिनीको विरुद्धपनि आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अमेरिकामा भने सन २०१६ मा स्वेत सर्वोच्चतावादी सोचका विरुद्ध एण्टिफाको चलखेल देखिएको थियो । राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्पलाई हराउन सन २०१६ मा यो संगठनको सक्रियता बढेको थियो । तर अमेरिकामा भने एण्टिफाको नाम सन २००७ मा पहिलो पटक पोर्टल्याण्ड ओरिगनको रोज सीटीमा सुनिएको थियो । सन २०१७ पछि अमेरिकामा एण्टिफाको गतिविधि केही बढेको देख्न सकिन्छ ।
अराजक र हिंशात्मक प्रदर्शन
एण्टिफाले आफ्ना गतिविधि अन्य संगठन जस्तै ब्यानर नै लिएर संचालन गर्दैन । यसको मुख्य ध्येय अरुले गरेको प्रदर्शनलाई अराजक बनाउनु, हिंशात्मक प्रदर्शनलाई प्रश्रय दिनु भएको आरोप विपक्षीले लगाउदै आएका छन । पूँजीवादको विरोध गर्नु तथा वर्तमान साशकीय प्रणालीको विरोध एण्टिफाको गतिविधिमा देखिन्छ । अन्य समर्थकहरुमाथी भौतिक आक्रमणमै उत्रिनु जस्ता कार्यहरु एण्टिफाले गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एण्टिफाको गतिविधिप्रति अमेरिकी मुलधारका राजनीतिक दलहरुको पनि आपत्ति रहंदै आएको छ । सन २०१७ मा क्यालिफोर्नियामा भएको एण्टिफाको गतिविधि र हिंशात्मक प्रदर्शनप्रति सभामुख न्यान्सी पेलोसीले आपत्ति जनाउंदै पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज उठाएकी थिइन । रिपव्लिकन र डेमोक्रयाटिक नेताहरुले एण्टिफालाई अमेरिकाको स्वतन्त्रताको हकको विरोधी समुहको रुपमा आरोप लाग्ने गरेको छ ।
के एण्टिफा आतंककारी संगठन घोषित होला ?
डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकी सत्तामा आएपछि अमेरिकामा एण्टिफाको गतिविधि बढ्दै गएको देखिन्छ । ट्रम्पले दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गरेपछि उग्र बामपन्थी धारको गतिविधीलाई बल पुगेको अनुमान गर्न अप्ठेरो छैन । स्वेत सर्वोच्चतावादको विरोधमा प्रगतिशिल नारालाई अघि बढाएर संगठन विस्तार गर्नु एण्टिफाको लक्ष्य देखिन्छ । रिपव्लिकनहरुले पहिले देखिनै एण्टिफालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन । राष्ट्रपति ट्रम्पले एण्टिफाका विरुद्ध आतंककारी संगठन घोषणा गर्नको लागि प्रमाण जुटाउन एफबीआइ र होमल्याण्ड सेक्युरिटीलाई आदेश दिइसकेका छन । तर अमेरिका जस्तो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति भएको मुलुकमा कुनै संगठनलाई आतंककारी घोषणा गर्न त्यति सहज देखिंदैन । त्यसकोलागि डेमोक्रयाटहरुको पनि समर्थन जरुरी हुन्छ ।